विश्वास गर्नुस् यी महिला नै हुन् Kasthamandap Daily
विश्वास गर्नुस् यी महिला नै हुन्
एजेन्सी। तपाइँले धेरै सुन्दर महिलाका विषयमा सुन्नु भएको होला। कसैसँग पनि तपाइँले यो प्रश्न गर्नुहुन्छ की महिलाको परिभाषा के हो ? जवाफ के हुनसक्छ भने महिला कोमल हुन्छन्। तर आज हामी तपाइँलाई यस्ती महिलाको विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौं जो यो परिभाषा भन्दै निकै फरक छिन्।
यी महिला आफ्नो अलग शरीरका कारण विश्वभर चर्चित छन्। रोमानियाकी यी अलीना पोपा आफ्नो मस्कुलर बडीका कारण चर्चित छन्। अलीनाको बडी देख्दा मानिसको पसिना छुट्छ। ३९ वर्षीया अलीनाको हाइट पाँच फिट ९ इनच छ भने वजन १०७ किलोग्राम।
पेशाले जीम ट्रेनर अलीनाले वेट लिफ्टिङको तालिम लिन सुरु गरिन्। उनको यो निर्णयलाई बाँकी महिलाभन्दा उनलाई बेग्लै बनायो। जब अलीना १९ वर्षकी थिइन तब उनले बडी बिल्डिङ सुरु गरेकी थिइन्। उनले यत्रो वर्षको मेहनतले बडी बिल्डिङको ताज जित्न सफल भइन्।
२००० मा उनले पहिलो पटक स्थानीय च्याम्पियनशिपमा भाग लिइन्। यो च्याम्पियनशिपमा उनले दोस्रो स्थान जित्न सफल भइन्। त्यसपछि अलीनाले पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन। २०११ मा उनले मिस ओलम्पियाको ताज जित्न सफल भइन्।
पोपाको बडी बल्डिङप्रतिको लगाव यस्तो थियो की २०१५ मा घाइते भएका कारण प्रतियोगितमा भाग लिन पाइनन्। तर मेहनत गरेर उनले २०१६ मा फेरि उनले विश्व च्याम्पियनमा तेस्रो स्थान जित्न सफल भइन्। २०१८ मा अर्को विश्व च्याम्पियनमा उनी प्रथम भइन्।
धेरै रुने बच्चाका आमाबुवालाई आकर्षक पुरुस्कार
एजेन्सी । तपाईंलाई आफ्ना बच्चा रोएको मन पर्छ ? यो प्रश्नमा धेरैजनाको जवाफ पक्कैपनि & ...
तपाईले याद गर्नु भएको छ ? घडीको विज्ञापनमा सँधै १०ः१० किन बजेको हुन्छ ?
एजेन्सी । घडी लगाउनमा हामीमध्ये सबै सौखिन नै हुन्छौ । नयाँ–नयाँ प्रविधिसँगै बजारमा धेरै ...
श्रीमानले दाह्री नकाटेको, ननुहाएको भन्दै अदालतमा
एजेन्सी । आजकाल स–सानो कुरामा सम्बन्ध टुट्ने स्थितीमा पुग्छ । सम्बन्धविच्छेदका विभिन्न ...
बेलायतको संसदमा अर्धनग्नहरूको प्रदर्शन
एजेन्सी । जलवायु परिवर्तनको विरोध गर्ने एक समूहले अर्धनग्न भएर बेलायतको तल्लो सदन हाउस अफ ...
सहकर्मीले पादेर हैरान गरेपछि ...
काठमाडौँ । अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा एकजना व्यक्तिले झण्डै २० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम ...
काठमाडौं । एक आमा आफ्नो बच्चाको खुसीका लागि आफ्ना सबै खुसी त्याग गर्छिन्, तर रुसमा एक महिलाले ...
यो हो १५ करोडको परेवा !
बीबीसी । बेल्जियममा एउटा परेवा १।२५ मिलियन यूरो अर्थात् १५ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा लिलामी ...
कुनै पनि विधेयक अघि बढाउन नदिने खाँणको चतावनी
नेपालगञ्जमा भारतीय अखाद्य खानेतेल छ्यापछ्याप्ती
मुस्लिम समुदाय मदरसा शिक्षाप्रति आकर्षित
दाङमा २६ को मृत्यु
न्युजिल्यान्डसँग नमिठोगरी हार्यो भारत
दैलेखमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी सिंहको हत्या
दाङमा सिकलसेल एनिमियाको औषधि अभाव
मध्यपुरथिमि नगरपालिकाको आम्दानी ९१ करोड ७४ लाख